Julayi 31 Imihla yokuzalwa - Imihla Yokuzalwa
Eyona Imihla Yokuzalwa Julayi 31 Imihla yokuzalwa
Julayi 31 Imihla yokuzalwa
Julayi 31 Iimpawu zoBuntu
Iimpawu ezintle: Abemi abazalwa nge-31 kaJulayi imihla yokuzalwa banobuchule, bayakhuthaza kwaye banethemba. Bangabantu bokuqala, oovulindlela abakwiminyaka yabo, bahlala befuna izinto ezintsha. Aba bantu base-Leo banentliziyo efudumeleyo kwaye bayakhawuleza ukusabela nanini na xa umntu osondeleyo efuna uncedo lwabo.
Iimpawu ezimbi: Abantu baka-Leo abazalwe nge-31 kaJulayi bazingca, banomdla kwaye bayathandana. Bayabaphazamisa abantu abazama ukuphatha yonke into eyenzekayo ejikeleze bona, kwanobomi babanye. Obunye ubuthathaka beLeos kukuba zilungisiwe kwaye zihlala zilandela ezazo izimvo kunye nemigaqo apho zinokuthi zisindiswe khona kwaye zingathandi ukuba bafuna ukusindiswa.
Ukuthanda: Ukuba kukhuphiswano okanye kwisikhundla esikhokelayo.
Inzondo: Ukugxekwa ngokungeyomfuneko.
Isifundo sokufunda: Ukuyeka njani ukulawula nokulawula kwaye uvumele abantu baziveze yenye into ekufuneka eyenzile uLeo.
Umngeni wobomi: Ukuba nolwazelelelo novelwano.
Ulwazi oluthe kratya ngoJulayi 31 wokuzalwa ngezantsi ▼
Ukuhambelana kothando lweTiger kunye nehashe: Ulwalamano olungenamsebenzi
Ukuhambelana kwe-Ox kunye neNyoka: Ubudlelwane obumnandi
I-sagittarius indoda kunye ne-sagittarius woman ukuhambelana
I-scorpio ibhinqa ibeka iingxaki zomntu
Ngaba banyanisekile kubudlelwane
Iminyaka engama-32 (ngoJanuwari 6, 1984)
loluphi uphawu lwangoSeptemba 19
yintoni ngoSeptemba 6 uphawu lweenkwenkwezi